Fandoavam-bola mandeha ho azy fitantanana fananana | Zeevou Features
Toetoetra » fandoavam-bola
Fandoavam-bola mandeha ho azy
Tsy mora ny manangona vola aloan'ny vahiny amin'ny fijanonany. Ireo tranokala misy lisitra sasany ary OTAs manangona vola amin'ny anaran'ny mpampiantrano. Raha tsy maintsy ataonao ny tenanao dia mety ho mavesatra izany. Na dia azonao atao aza ny manangona vola amin'ny alàlan'ny famindrana banky na amin'ny vola, ny olana ara-pitantanana mifandraika amin'izany dia manan-danja. Ny fomba tsotra indrindra hanamboarana ny fanangonana fandoavam-bola dia amin'ny carte de crédit / debit.
Ny ankamaroan'ny mpamatsy rindrambaiko izay manolo-tena hanangona vola amin'ny anaran'ny mpampiantrano ho an'ny famandrihana izay avy amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo. Booking.com, dia handoa ny antsipiriany momba ny karatra natolotry ny vahiny nalefa tany amin'ny mpitantana fantsona tamin'ny alàlan'ny fampidirana API. Na izany aza, midika izany fa tsy azon'ny mpampiantrano atao ny mamantatra raha toa ny tompona karatra marina manome alalana an'ity fifanakalozana ity. Izany dia miteraka chargebacks noho ny karatra nangalarina nampiasainy na ny filazany fa fisolokiana nampiantranoina ny vahiny.
Olana iray hafa manaporofo fa sarotra ho an'ny mpitantana ny fanofana fialan-tsasatra ny fanangonana vola amin'ny famandrihana mivantana na serivisy fanampiny. Ny fanazavanao ny vola naloan'ny mpanjifa taminao na ny fantsona tamin'ny fotoana nanaovana famandrihana dia matetika fizotry ny tanana.
Ahoana ny fomba hanampian'ny fandoavam-bola mandeha ho azy an'i Zeevou?
Ny fizotran'ny fandoavam-bola mandeha ho azy feno an'i Zeevou dia mandrindra ny iray manontolo fizotry ny famandrihana. Afaka matoky ianao fa efa voakarakara avokoa ny zava-drehetra alohan'ny hanomezana alalana ny vahiny. Zeevou Pay dia manampy anao hanara-maso ny fandoavam-bola, ary hanodina ny fanangonana ny fandoavam-bola ho an'ny fijanonana tenany na izay fanampiana ampiasain'ny vahiny.
Ao anatin'ny fizotry ny fanamafisana famandrihana 5-dingana, dia nandefa rohy 3-D azo antoka 3 ny vahiny. Io dia ahafahanao manangona fandoavam-bola amin'ny famandrihana izay avy amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo na ny tranonkalanao manokana. Mandritra ny fizotry ny fandoavam-bola dia hanamarina ny fifampiraharahana ny bankin'ny tompon'andraikitra. Ny tompon'antoka amin'ny karatra dia manamarina amin'ny alàlan'ny tenimiafinao na kaody miafina nalefa tany amin'ny nomeraon-telefaonin'izy ireo, raha ampandehanana ny 3-D Secure. Tsy ny karatra rehetra no mendrika ny XNUMX-D Secure. Most mpamatsy vavahady hiara-miasa izahay dia hamela anao hametraka ambaratonga samihafa amin'ny fitakiana fiarovana arakaraka ny habetsahan'ny fifanakalozana.
Ny fizotran'ny fandoavam-bola mandeha ho azy an'i Zeevou dia mamela anao handrotsaka vola aloa ivelan'ny rafitra amin'ny vola, amin'ny alàlan'ny famindrana banky, na amin'ny alàlan'ny mpamaky karatra. Azonao atao ny mampakatra ny antsipirian'ny fifanakalozana toy ny fotoana nandraisana azy, ny fanovozan-kevitra ary manampy fampidirana raha tianao. Na dia mamela anao handoa vola amin'ny telefaona aza i Zeevou dia tokony hanao izany ianao raha matoky ilay vahiny. Tokony ho azonao antoka fa tsy mampiasa karatra nangalarina izy ireo na mety hampiakatra chargeback.
Mba hanamorana ny fandoavam-bola amin'ny fijanonana maharitra kokoa, azonao atao ny mifidy ny faktiora isan-kerinandro na isam-bolana. Ny tsingerina dia isaina amin'ny daty fanombohan'ny famandrihana na amin'ny fiandohan'ny herinandro / volana. Ny fisehoan'ny Partial Payment Link dia ahafahanao mamorona rohy fandoavam-bola hanangonana vola amin'ny ampahany amin'ny famandrihana. Azo ampiasaina izy ity raha olona maro no te hizara ny vidin'ny famandrihana, na raha tsy tianao ny manangona ny fandoavam-bola mialoha.